Hal cunug oo ku geeriyooday qarax miinada dhulka ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal cunug oo ku geeriyooday qarax miinada dhulka ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
November 28, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Miinada dhulka oo lagu sameeyay gudaha Soomaaliya [Photo: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Hal cunug ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miinada dhulka ah oo ka dhacday xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo, sida ay ilo-wareedyo caafimaaad u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Shilka ayaa ka dhacay saakay oo Isniin ahayd magaalada Gaalkacyo, miinada ayaa qaraxday iyadoo caruurtu ay goobta ku ciyaarayeen.
Caruurtii ku dhaawacantay qaraxa ayaa loo qaaday isbitaalka, waxayna ku suganyihiin xaalad caafimaad oo wanaagsan, sida ay saraakiisha caafimaadka sheegeen.
Ma cadda in miinada ay ahayd mid dhow iyo in ay ahayd mid ka hartay dagaalo hore.
Ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug asbuucyadii lasoo dhaafay.
Dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Soomaaliya, caruurta ayaa ah kuwa ugu badan oo ku waxyeelooba miinooyinka dhulka iyo walxaha kale ee qarxa. Mana ahan kuwo ku wacyigashan khatarta walxahaas.
December 21, 2016 Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay dooni ganacsi oo ku degtay meel dhowr mayl u jirta dekada Boosaaso
Midowga Yurub oo xeebaha Soomaaliya kasii ilaalin doona burcad-badeeda ilaa iyo dhammaadka 2018
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntand ayaa u hambalyeysay Ilhaan Cumar guusheeda kadib markii ay noqotay haweenaydii ugu horeysay oo Soomaali Muslim ah oo loo doorto aqalka Congress Mareykanka Arbacadii. Bayaan kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Khamiis [...]